१९ औं अनशन थाल्नु भएका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/१९ औं अनशन थाल्नु भएका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक
१९ औं अनशन थाल्नु भएका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक
काठमाडौं । लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसी फेरि अनशन वस्नु भएको छ । यो सँगै उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको छ । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका रानीचौरस्थित बाविरामष्ट मन्दिरमा १९ औं अनशन थाल्नु भएका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको हो । तर डा. केसीले अस्पताल जान मान्नु भएको छैन । चिकित्सकका अनुसार डा.केसीको शरीरमा अक्सिजन र पिसाबको मात्रा पनि घट्दै गएको छ ।
उहाँको नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्दै आउँनु भएका कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा. प्रविण गिरीका अनुसार केसीको रक्तचापसमेत घटिरहेको छ । उहाँका अनुसार संक्रमणको जोखिम भएकाले सत्याग्रह बसेको ठाउँमा भ्यान ओपन गरेर स्लाइन लगाउन सकिएको छैन् । तर डा. केसी अस्पताल जान मानिरहनु भएको छैन । केसीले पाँचौ दिन शुक्रवारको जाँचमा सुगरको परीक्षण गर्न नमानेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो बीचमा साझा पार्टी बिशेष टोलीले डा. केसीलाई तुरून्तै सुविधासम्पन्न अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति निकालेको छ ।
यसअघिका अन्य सत्याग्रहमा धेरै दिनसम्म स्वस्थ देखिने डा केसीको स्वास्थ्य यो पटक सत्याग्रहको पाँचौ दिनमैँ ‍नाजुक बन्दै गएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। उनलाई तुरून्तै सुविधासम्पन्न अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्नु पर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। तसर्थ, डा केसीका जनमुखी माग र उनको स्वास्थ अवस्थाका बारे हामी सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ।
डा केसीले समतामूलक, भ्रष्टाचाररहित र न्यायपूर्ण समाजका लागि राखेका मागहरू आफूलाई समाजवादी भन्ने कम्युनिस्ट सरकारको आफ्नै एजेण्डा हुनु पर्ने हो। तर विडम्वनाको कुरा, सामान्य अवस्था होस् या अहिले कोभिड १९ को असामान्य अवस्था, सरकार भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादमा मात्र होइन लोकतन्त्र र संविधानकै धज्जी उडाउने गरि चोर बाटोबाट नियुक्ति र मनोनयन गर्नमा व्यस्त छ। यस्तो अवस्थामा डा केसीको स्वास्थ्य तलमाथि भयो भने त्यसले जनताको धैर्यको बाँध टुटाउने छ र त्यसको मूल्य सरकारका लागि भारी हुनेछ। जनबोलीबाट
source: nepali surya
४० लाखमा डाक्टरले बनाए ‘भाइरल घर’ : फोटो र भिडियो खिच्नेको भिडले बस्नै छाडे
अन्तरजातीय विवाहका कारण ससुराली जान नपाएपछि खुलेको ‘ससुराली क्याफे’